कोरोना संक्रमणबाट पूर्वसावधानी अपनाऔं | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
कोरोना संक्रमणबाट पूर्वसावधानी अपनाऔं
Published On : २४ फाल्गुन २०७६, शनिबार ०९:३७
कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसबाट जोगिनका लागि नेपालले पूर्वसावधानी अपनाउनका लागि आग्रह गरेको छ ।
संसारका विकसित मुलुकहरुमा यो रोगबाट हजारौंको ज्यान गइसकेको छ । उनीहरुले बलबुताले भेटेसम्मको उपाय गर्दा पनि रोगको औषधी, भ्याक्सिन तयार गर्न सकेका छैनन् । रोकथाम नै एकमात्र उपाय भन्ने उनीहरुको निश्कर्ष छ ।
यदि हाम्रो जस्तो बिपन्न मुलुकमा यो रोगको प्रकोप फैलियो भने अनियन्त्रित हुनेछ । साराका सारा तहसनहस हुनसक्ने छ । त्यसैले यो रोग लागेपछिको कल्पना गरेर भयभित हुनुभन्दा रोगबाट रोकथामको उपाय अपनाउनु नै उचित हुनेछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसबाट सजग रहनु आव्हान गरेको छ ।
इमर्जेन्सीबाहेक अन्तर्राष्टिूय उँडानहरु बन्द गर्न, यात्रुहरुलाई एयरपोर्टमा क्वारेण्टाइनमा राख्न पनि आव्हान गरेको छ । देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले आफ्ना जिल्लाभित्र मेला, महोत्सव नगर्न, इमर्जेन्सीबाहेक भीडभाडमा नजान, मास्क लगाएर मात्र हिडडुल गर्नलगायतका निर्देशन दिएका छन् । विद्यालयहरुमा चाँडै बार्षिक परीक्षा सकेर विदा गर्न, करिब एक महिना माछामासु नखान पनि बिभिन्न निकायहरुले सामाजिक सन्देशहरु प्रबाह गरिरहेका छन् । यी सबै सावधानीका उपायहरु रोगको संक्रमण नफैलन सहायक हुनेछन् ।
अरु रोगहरुको सन्दर्भमा पनि रोगलागेपछि उपचार गर्नभन्दा रोगै लाग्न नदिनु वुद्धिमानी हुनेछ भन्ने नेपाली कथन छ । यो कोरोना त उपचार नै नहुने भएकाले यसबाट जोगिनु नै वुद्धिमानी हुनेछ ।
अस्पतालहरुले पनि यसखालका बिरामीहरुको पूर्व अनुमान गरी तयारीका कामहरु गर्नुपर्छ । गोरखा अस्पतालले उपचारका लागि केही पूर्वतयारी गरेको छ । अन्य नीजि अस्पतालहरुले पनि उपचारका लागि आइसोलेशन बनाउने, इमर्जेन्सी उपचार टिम बनाउनेलगायतका पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ।